Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mpilatsaka nampiresaka fotsiny | NewsMada
Hevitra mandalo; resaky ny mpitsimpona akotry: mpilatsaka nampiresaka fotsiny
Noheverina ho sarotra ny fandidian’ny HCC teo amin’ny fitsimponana ny mpilatsaka nahafeno ny fepetra ahafahana misedra ny safidim-bahoaka izay tompon’ny fahefana hifidy izay ho filoham-pirenena mandritra ny dimy taona ho avy. Tampina ny vavan’ireo mpitsikera, rehefa mazava ny fandinihana ny rariny sy ny lalàna, (lalàna sy Lalàmpanorenana mihitsy aza no azo lazaina fa mifehy ny didy raisiny), tsy mitavozavoza araky ny voalazan’ny mpanaratsy io Fitsarana Avo io. Tsy indray nihodina akory ny masoandro taorian’ny fikatonan’ny fandraisana ny antotan-taratasy fanamafisana ara-panjakana ny filatsahana dia nanambara ny valin’ny fisivanana nataony ny HCC.
Mahagaga ireo olona, amin’ny zava-dehibe toy izao mifehy ny lalàna tian’ny vahoaka hitantanana ny firenena, dia mbola misy ihany no manana fahasahiana manevateva ny vahoaka sy ny tsy fanomezana hasina ny tanindrazana amin’ny fanamaivanana ny raharaha noho ny hamaivanan-doha. Nisy dia tsy vonona mihitsy ary ny tsy fahasahiany hanefa an’ilay vola atao antoka no nanilihana azy. Ao ihany koa ireo nety voafitaky ny antoko tsy fanta-pototra eny amin’ny minisiteran’ny Atitany. Ny tranga rehetra voalazan’ny HCC ho anton’ny tsy fandraisana ny filatsahany dia mitory avokoa ny tsy fahazakan’ny zanakatidohan’izy ireny ny andraikitra filoham-pirenena.
Teo alohan’izany anefa dia nisy tamin’ireo voahilika ireo (vavy na lahy) no niseho be fananarana toy ireny mpitory teny ireny nitaky fiovana toe-tsaina. Marina moa izany, nefa tsy ny olona maramara saina toy ireny no mendrika ampita an’izany aty amin’ny fiarahamonina. Tsy nisy tavela ny hafatra napetrak’izy ireny, ny firesahana sy fanesoana ny hakelin’ny sain’izy ireny no mandany ny andron’ny olona tsy manan-koresahana. Tonga anefa ny fotoana iarahana mandinika an’ireo fikasana sy tetika fanatanterahana an’izany izay samy manana ny arosony avy ny mpilatsaka isan’isany.
Ny mponina moa efa leon’ny fanomezana toky safobe mantsina, fitakina tsotsotra izay tsy tanteraka hatramin’izay no apetrany. Enga anie ny vokatry ny fandrosoana mba tsy ho fehezina intsony ho sitrahan’olom-bitsy fa mba hiantefa aty amin’ny sarambabem-bahoaka izay ianjadian’ny fahasahiranana na fahantrana mihitsy aza ho an’ny sasantsasany tsy afaka ho lazaina hoe vitsy. Azo fehezina amin’ny teny fohy ny fiovana takin’ny vahoaka : eo am-pikabariana samy maneho ny fahatsiarovana ny vahoaka daholo, ampototry ny molotra fotsiny izany matetika fa rehefa manoloana ny tombontsoa dia maro ireo resin’ny fakam-panahy ka tsy mahafantatra intsony afa-tsy ny tenany sy ny havana aman-tsakaizany. Ahoana no ahafahana hifehy ny fitondrana tsy hirona amin’izany ? An’ny mpifidy amin’izao fotoana fandresen-dahatra izao no mitaky antoka amin’ireo mpilatsaka ahafahana mamatotra ny tànany.